Dariiqa Horumarinta - Sichuan Shuer Medical Devices Co, Ltd.
2007, shirkado aasaasi ah oo aasaasi ah
Bilowga aasaasida, horumarintu waxay ku tiirsan tahay horumarin ku tiirsan iyo aasaasida sumado qaran.
Sannadkii 2010-kii, ayaa wershaduhu xannibay
sanadka horumarka degdega ah, warshada waa lasii balaariyay miisigana waa lasii balaadhiyay.
Sannadkii 2014, Abuuritaan Joogto ah
Shaoxing Juneng Waxyaabaha Teknolojiyadda Cusub ee Co.LTD.waxaa la aasaasay, qaar ka mid ahna dibedda ayaa loo rogay cilmi-baaris madax-bannaan iyo soo-saarid, iyo horumarinta ganacsiga dhoofinta, oo noqotay saldhigga tababarka ee jaamacadda shaoxing.
ln 2017, wuxuu dhameeyay xoogaa guul ah
Sichuan juneng filter co. ltd.-da'da cusub, fikirka cusub iyo barta cusub, waxaan ka jabinay noN no.1 badan, oo aan noqono mid ka mid ah wax soosaarayaasha hormuudka u ah faylalkaan. shirkadeenuna waxay horay ugu sii socotaa lPO.
ln 2018, horumarka joogtada ah
Waxaa aqoonsaday Shifeng, Youbang, Guijun, Tai Ji, Xinxiwang iyo shirkado kale, waxay noqdeen la-hawlgalayaasheena muddada-dheer waxayna aasaaseen hoggaankeenna ku aaddan qalabka miiridda ee dhalaalay.
In 2020, Kala bax mustaqbalka
Waxaan noqonay shirkad loogu talo galay alaabada qalabka laxiriira dawooyinka, waxaana lagusoo daray liistada maaddooyinka muhiimka ah ee kahortaga cudurada faafa ee shirkadaha dammaanad qaadka ah, ee hogaaminaya warshadaha dhalaalaya.
Alaabada Kulul - Khariidadda bogga - AMP Mobile 3ply Maaskaro Maaskaro Waji ah, Heerka 3 Maaskarada Qalliinka, Maaskaro Ffp3, 3 Lakab Maaskaro La Tuuri Karo Iyadoo Fda, 3 Maaskarada Wajiga ee Fly Non-xidhkii, 3ply Maqaalka Wajiga Qalliinka,